Brain Aneurysm (ဦးနှောက်သွေးကြောဖောင်းခြင်း) - Hello Sayarwon
Brain Aneurysm (ဦးနှောက်သွေးကြောဖောင်းခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Brain Aneurysm (ဦးနှောက်သွေးကြောဖောင်းခြင်း)
Brain Aneurysm (ဦးနှောက်သွေးကြောဖောင်းခြင်း) ကဘာလဲ။
Brain aneurysm တနည်း cerebral aneurysm ဆိုတာ ဦးနှောက်ကိုထောက်ပံ့နေတဲ့ သွေးကြောနံရံ၏ လျော့လျဲသွားသောနေရာတစ်နေရာမှ ဖောင်းလာခြင်းဖြစ်တယ်။ ဦးနှောက်သွေးကြောဖောင်းခြင်းဟာ များသောအားဖြင့် လက္ခဏာမပြတာကြောင့် သတိမထားမိဘဲ ရှိတတ်တယ်။ တချို့ရှားပါးသောအခြေအနေတွေမှာတော့ ထိုဖောင်းလာသောနေရာမှ ပေါက်ထွက်သွားကာ သွေးများဦးခေါင်းခွံထဲဝင်သွားပြီး လေဖြတ်တတ်ပါတယ်။
ထိုဖောင်းနေသောသွေးကြောနေရာ ပေါက်သွားတဲ့အခါ Arachnoid လို့ခေါ်တဲ့ဦးနှောက်အမြှေးပါးလွှာတစ်မျိုးအောက်မှာသွေးယိုခြင်း ဖြစ်လာတယ်(subarachnoid hemorrhage)။ သွေးယိုခြင်းပေါ်မူတည်ကာ ဦးနှောက်ပျက်စီးမှု သို့ သေဆုံးခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်တယ်။
အဖြစ်အများဆုံးသွေးကြောကတော့ ဦးနှောက်အောက်ဖက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ circle of Willis လို့ခေါ်တဲ့သွေးကြောကွန်ယက်ဖြစ်တယ်။
Brain Aneurysm (ဦးနှောက်သွေးကြောဖောင်းခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
တကယ်တော့ လူထုတစ်ခုလုံးရဲ့ ၁.၅ မှ ၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက်မှာ ဦးနှောက်သွေးကြောဖောင်းနေနိုင်တယ်။
Brain Aneurysm (ဦးနှောက်သွေးကြောဖောင်းခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
များသောအားဖြင့်လက္ခဏာမပြတတ်ဘဲ တခြားမဆိုင်သော အခြေအနေတစ်ခုခုအတွက် စစ်ဆေးရင်းနဲ့သာ တွေ့ကောင်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ တချို့အခြေအနေတွေမှာတော့ ထိုသွေးကြောဖောင်းကြီးဟာ မပေါက်ဘဲ တခြားအစိတ်အပိုင်းတွေပေါ် ဖိမိတာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်။ ထိုအခါမှာဆိုရင်တော့ ဘယ်လောက်ဆိုးရွားသလဲနဲ့ ဦးနှောက်ရဲ့မည်သည့်အပိုင်းကိုဖိထားသည်ပေါ်မူတည်ပြီး ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အမြင်အာရုံဝါးခြင်း၊ စကားဝါးခြင်း၊ ဇက်နာခြင်း တို့ခံစားရနိုင်တယ်။
ဖော်ပြထားတာအပြင် တခြားလက္ခဏာတွေလည်းရှိနိုင်သေးတာကြောင့် သိလိုသည်များရှိပါက ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးကြည့်သင့်ပါတယ်။
ဖော်ပြပါလက္ခဏာတွေပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ချက်ခြင်းအရေးပေါ်ကားခေါ်ပါ သို့ ဆေးရုံသို့ပြေးပါ။
Brain Aneurysm (ဦးနှောက်သွေးကြောဖောင်းခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
သွေးလွှတ်ကြောနံရံအားနည်းလျော့ရဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ များသောအားဖြင့် သွေးကြောအခွဲနေရာတွေဟာ အားလျော့တတ်တာကြောင့် ထိုနေရာတွေမှာအဖြစ်များတတ်တယ်။
ဦးနှောက်ရဲ့မည်သည့်နေရာမှာမဆိုဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အဖြစ်အများဆုံးကတော့ ဦးနှောက်အခြေရှိ သွေးလွှတ်ကြောများဖြစ်တယ်။
တချို့သောအချက်တွေက အချိန်နဲ့အမျှ ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်။
သွေးဆုံးပြီးနောက် estrogen အမဟော်မုန်းနည်းခြင်း
Brain Aneurysm (ဦးနှောက်သွေးကြောဖောင်းခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ရောဂါလို့ခေါ်တဲ့ မျိုးရိုးလိုက်တွယ်ဆက်တစ်သျူးမူမမှန်ခြင်းရောဂါဟာ သွေးကြောနံရံတွေကိုအားလျော့စေပါတယ်။
ကျောက်ကပ်တွင် အရည်အိတ်ငယ်များတွယ်သော မျိုးရိုးလိုက်ရောဂါတစ်မျိုးဟာ သွေးပေါင်တက်စေတယ်။
ဦးနှောက်ရှိ သွေးလွှတ်ကြောနဲ့သွေးပြန်ကြောကြား ပုံမှန်မဟုတ်လမ်းကြောင်းဆက်သွားခြင်းဟာ ပုံမှန်သွေးစီးကြောင်းကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။
မိသားစုတွင်း အထူးသဖြင့် မိဘ၊ မောင်နှမများတွင် ဦးနှောက်သွေးကြောဖောင်းခြင်းရှိပါကလည်း ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။
Brain Aneurysm (ဦးနှောက်သွေးကြောဖောင်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဦးနှောက်သွေးကြောဖောင်းခြင်းဟာလကဏာပြလေ့မရှိတာကြောင့် များသောအားဖြင့်က တခြားအခြေအနေတစ်ခုခုကို စစ်ဆေးရင်း ရှာဖွေသိရှိလေ့ရှိပါတယ်။
တကယ်လို့ ဆရာဝန်က သင့်မှာ ဦးနှောက်သွေးကြောဖောင်းနေတယ်လို့ထင်ရင်တော့ အောက်ပါစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်-
စီတီရိုက်ခြင်း(CT scan) – စီတီရိုက်ခြင်းဟာ ဦးနှောက်တွင်း သေးယိုနေမှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိစေပါတယ်။ တကယ်လို့ သွေးကြောပေါက်ပြီး ဦးနှောက်အမြှေးပါးတွင်းသွေးယိုတယ်လို့ သံသယရှိရင်တော့ ကျောဆစ်ရိုးဖောက်စစ်နိုင်ပါတယ်။
CTA scan – သွေးကြောတွေအကြောင်းကို စီတီစကမ်ထက် ပိုတိတိကျကျဖော်ပြနိုင်ပါတယ်။ CTA scan ဟာ ဆိုးဆေးတစ်မျိုးကို သွေးတွင်းထိုးထည့်ကာ အထူးကွန်ပျူတာနည်းပညာ နဲ့ စီတီရိုက်ခြင်းတို့ကိုပေါင်းစပ်ကာ သွေးကြောများရဲ့ပုံရိပ်ကို ရိုက်ကူးခြင်းဖြစ်တယ်။
သံလိုက်ဓါတ်မှန် (MRI) – CTA scan နဲ့ဆင်ပြီး MRI ဟာ လျှပ်စစ်စက်ကွင်းနဲ့ ရေဒီယိုလှိုင်းကိုသုံးကာ သွေးကြောများပုံရိုက်ကိုရိုက်ကူးခြင်းဖြစ်တယ်။ CTA scan နဲ့ ဦးနှောက်သွေးကြောပုံရိပ်ရိုက်ကူးခြင်းကဲ့သို့ သံလိုက်ဓါတ်မှန်ကလည်း ပုံရိပ်ပိုထင်ရှားဖို့အတွက် ဆိုးဆေးသုံးလေ့ရှိပါတယ်။
ဦးနှောက်သွေးကြောပုံရိုက်ရိပ်ကူးမှု – လက်မောင်း သို့ ပေါင်ခြံမှ သွေးကြောတစ်ခုထဲသို့ ပြွန်ငယ်တစ်ခုသွင်းကာ ဓါတ်မှန်ရိုက်ကူးခြင်းဖြစ်တယ်။ ဆိုးဆေးတစ်မျိုးထိုးသွင်းကာရိုက်ကူးခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ထိုဆိုးဆေးက သွေးလွှတ်ကြော၊ ဖောင်းနေသောသွေးကြော အခြေအနေများကို ဓါတ်မှန်ပေါ်မှာပေါ်အောင်ကူညီပေးပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါစမ်းသပ်မှုတွေထက် ပိုပြီးအန္တရာယ်ရှိပေမယ့် သေးငယ်တဲ့သွေးကြောဖောင်းများ ( <5mm) ကိုတွေ့ရှိနိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းဖြစ်တယ်။
Brain Aneurysm (ဦးနှောက်သွေးကြောဖောင်းခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဆေးဖြင့်ကုသမှု – သေးငယ်ပြီး မပေါက်သေးသော သွေးကြောဖောင်းများဟာ မကြီးလာပါက၊ လက္ခဏာတစ်ခုခုမပြမချင်း သို့ မပေါက်မချင်း ကုစရာမလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သွေးပေါင်ချိန်၊ သွေးတွင်းကိုလက်စရောနဲ့ တခြားကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကို စဉ်ဆက်မပြတ် စစ်ဆေးနေဖို့ကတော့ အမတန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။ သေးငယ်ပြီး မပေါက်သေးသော သွေးကြောဖောင်းများဟာ သူတို့ကြီးမလာကြောင်းနဲ့ ပြောင်းလဲမှုမရှိကြောင်း သေချာဖို့အတွက် ပုံမှန်ပုံရိပ်ရိုက်ကူးစစ်ဆေးနေဖို့လိုပါတယ်။
ဦးနှောက်အာရုံကြောခွဲစိတ်မှု – လူတစ်ယောက်ရဲ့ အန္တရာယ်ရှိနိုင်ချေပေါ်မူတည်ကာ ခွဲစိတ်မှုကိုထည့်စဉ်းစားသင့်တယ်။ ခွဲစိတ်တဲ့အခါ မေ့ဆေးပေးပြီး ဦးခေါင်းခွံမှာ လိုအပ်သလောက် အပေါက်ဖောက်ကာ ဦးနှောက်တစ်သျူးကိုအသာဖယ်ကြည့်ပါက ဖောင်းနေသောသွေးကြောတွေ့ရပါတယ်။ ထိုသွေးကြောဖောင်းအရင်းကိုကလစ်နဲ့ညှပ်ပြီး ထိုအဖောင်းထဲသွေးဝင်မှုရပ်လိုက်မှာဖြစ်တယ်။ ရိုးရှင်းသောခွဲစိတ်မှုဆိုပါက ၄ ရက်မှ ၆ ရက်ခန့်သာနေရပြီး ကောင်းကောင်းကောင်းဖို့ကတော့ ရက်သတ္တပတ်များစွာကနေ လပေါင်းများစွာထိကြာနိုင်ပါတယ်။
ဖောင်းနေသောသွေးကြောအရွယ်အစား၊ နေရာ၊ ပုံစံတို့ကို မူတည်ပြီး သွေးကြောအတွင်းမှကုသနိုင်တယ်။ ထိုနည်းဟာ ဦးနှောက်သွေးကြောပုံရိပ်ရိုက်ကူးနည်းနဲ့တူပြီး သွေးကြောတွင်းသို့ ပြွန်ငယ်ထည့်ကာ ဖောင်းနေသောနေရာသို့ တိုက်ရိုက်ဦးတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ဓါတ်မှန်အကူအညီဖြင့် သေးငယ်သောပလတ်တီနမ်အမျှင်ငယ်လေးကို သွေးကြောတွင်းထည့်ကာ ဖောင်းနေသည့်နေရာမှာ သွေးစီးကြောင်းတားသည့်အရာအဖြစ်ဆောင်ရွက်စေတယ်။ ထိုနည်းလမ်းမှာ ပြဿနာမရှိပါက ဆေးရုံတွင် တစ်ရက်၊ နှစ်ရက်ခန့်သာနေရန်လိုပြီး တကယ်လို့ သွေးကြောပေါက်ကာ ဦးနှောက်တွင်းသွေးယိုသွားခြင်းကဲ့သို့ တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါက လူနာအခြေအနေ၊ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များပေါ်မူတည်ကာ တစ်ပတ်မှလေးပတ်ခန့်ထိ ဆေးရုံတက်ရနိုင်ပါတယ်။
သွေးကြောမပေါက်သေးပါက သွေးကြောပေါက်ခြင်းကို အောက်ပါကနေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် တားဆီးနိုင်တယ်။
ဆေးလိပ်မသောက်ပါနဲ့၊ ဆေးလိပ်သောက်နေပါက ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီး သင့်လျော်သောနည်းဖြင့် ဖြတ်ရန်ကြိုးစားပါ။
ကျန်းမာရေးညီညွတ်စွာစားပါ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ၊ စားသောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းတို့ဟာ သွေးပေါင်ကျစေပါတယ်။ သင့်အတွက်လျော်ကန်မယ့် ပြောင်းလဲနည်းများ ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
ကဖိန်းဓါတ်လျှော့ပါ၊ ကဖိန်းဓါတ်ဟာ ရုတ်တရတ်သွေးပေါင်တက်စေပါတယ်။
ပြင်းထန်သောအားစိုက်ထုတ်ခြင်းရှောင်ပါ – အလေးအပင်တွေမတာမျိုး ရုတ်တရတ် အားစိုက်ထုတ်လိုက်ရတဲ့အလုပ်မျိုးတွေဟာ သွေးပေါင်ရုတ်တရတ်တက်စေနိုင်ပါတယ်။
Brain Aneurysm - Topic Overview.
http://www.webmd.com/brain/tc/brain-aneurysm-topic-overview#1. Accessed June 28, 2017.
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/brain-aneurysm/basics/definition/con-20028457. Accessed June 28, 2017.